उमेर समूहको भलिबल खै ? - Khelpati
उमेर समूहको भलिबल खै ?
बुधवार, बैशाख ८, २०७८ गिता राई
काठमाडौं । महिला भलिबलमा नछुट्ने नाम हो, कुमार राई ।
न्यु डाईमण्ड एकेडेमीमार्फत महिला खेलाडी उत्पादनमा नाम कमाएका राईले घरेलु भलिबलमा बेग्लै पहिचान बनाएका छन् ।
लामो समयदेखि भलिबलमा सक्रिय उनी खेलकुदको नीति नियमबाट खुशी छैनन् । भलिबल विकास नसक्नुको एक मुख्य कारण नीति नियम भएको उनको ठम्याई छ ।
‘भलिबल विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला अहिलेसम्म भएका खेलकुदका नीति नियम परिवर्तन हुनुपर्छ । खेलमा नचाहिदो नीति नियम ल्याउनुहुँदैन ।’ उनले भने ।
प्रशिक्षक राईले खेलमा सरकारी र गैरसरकारी भन्ने विवादलाई बढावा नदिएर सबै बराबर हुनुपर्ने बताए ।
‘प्रशिक्षकमा पनि सरकारी र गैरसरकारी प्रशिक्षक भनेर छुट्याउँछन् । यदि दक्ष प्रशिक्षक छ भने उसलाई जहाँपनि बराबर अवसर हुनुपर्छ । अनि मात्र राम्रा खेलाडी उत्पादन हुन्छन् । सरकारको खेलप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । र खेललाई निश्चित बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’ प्रशिक्षक राईले भने ।
उमेर समूहको बढी प्रतियोगितामा हुनुपर्छ ।
भलिबलमा मात्र नभएर सबै खेलमा उमेर समूह मात्र यस्तो एउटा पक्ष हो जहाँबाट उत्कृष्ट खेलाडीहरु निस्किन्छन् । तर घरेलु खेलकुदमा उमेर समुहका कमै प्रतियोगिता हुन्छन् ।
‘उमेर समूहको बढि भन्दा बढी प्रतियोगिता हुनुपर्ने हो । तर यहाँ प्रतियोगितानै छैन । एउटा राष्ट्रपति कप हुन्छ, त्यो जस्तो नराम्रो प्रतियोगितानै छैन । विद्यालयस्तरको प्रतियोगिता भनेको छ, ठूला, ठूला मान्छे आउँछन् ।’ उनले भने ।
प्रशिक्षक राईले विभिन्न उमेर समूह छुट्याएर उनीहरुलाई सम्हाल्ने बेग्लै व्यक्ति हुनुपर्ने बताए ।
उनले उमेर समूहबाट निस्किएका च्याम्पियन खेलाडीलाई विदेशमा प्रशिक्षण र प्रतियोगिता खेल्न पठाए उत्कृष्ट खेलाडी बन्ने बताए ।
‘फुटबलमा उमेर समूहको प्रतियोगिता भइरहेको । तर भलिबलमा खै त ? यो किन हुँदैन ? मैले यस्तो प्रश्न उठाए भने उसकोमा खेलाडी छ, उसले जित्नलाई यस्तो भन्यो भन्ने विषय बाहिर ल्याउछन् । यस्ता कुराहरु सम्बन्धित निकायमा बस्नेलेनै भन्छन् । यस्तो कुराहरु बोल्ने मान्छेहरु भएको निकायको कहिल्यै विकास हुँदैन ।’
उनले प्रतियोगिताको वार्षिक कार्यतालिका बनाएर पुरस्कार राशीबाट खेलाडीलाई बाँच्न सहज हुने योजना ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्छ
‘खेलमा वार्षिक कार्यतालिका अनिवार्य हुनुपर्छ । सोही अनुरुप प्रतियोगिता हुने, सरकारले हरेक खेलाडी उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने, विद्यालयस्तरमा प्रतियोगिता गराउने योजना बनाउनुपर्छ ।’ प्रशिक्षक राईले भने ।
उनले राम्रो सुविधा र अनुदान दिएमा खेलाडी उत्पादन गर्न गाह्रो नहुने बताए ।
‘विद्यालयलाई सुविधा तथा अनुदान दिएपछि प्रशिक्षण सुरु गर्छन् । न्यु डाईमण्ड जस्तो ५० स्कुलले ५० खेलाडी उत्पादन गर्यो भने १२ जना उत्कृष्ट खेलाडी निकाल्न गाह्रो हुँदैन,’ प्रशिक्षक राई भने, ‘त्यसैले यस्ता कुरा सरकारी नीति नियममा आउनुपर्छ । पहिला विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण शिक्षा कार्यालयको छुट्टै हुन्थ्यो । त्यसैले आफ्नो विद्यालयप्रति शिक्षा मन्त्रालयको दृष्टिकोण राम्रो होस् भनेर पनि प्रशिक्षण गर्थे । अहिले खेलकुदमा राजनीति छ । टेलिफोनको भरमा काम हुन्छ ।’
प्रशिक्षण गर्न आर्थिक समस्या
‘खेलाडी कस्तो उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा प्रशिक्षणमा भर पर्दछ । जति राम्रो प्रशिक्षण भयो उति राम्रो खेलाडी उत्पादन हुन्छन् । तर यहाँ प्रशिक्षण भनेको अर्थमा ठोकिन्छ, आर्थिक बलियो हुनुपर्छ ।’ राई भन्छन् ।
प्रशिक्षक राईले विभागीय भन्दा अरु टिमलाई आर्थिक समस्याका कारण प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताए ।
‘विभागलाई छोडेर अरु टिमलाई हेर्ने हो भने आर्थिक पक्ष कसैको बलियो छैन । उनीहरुसँग सरकारी सम्पति छ । निरन्तर प्रशिक्षण गर्न सक्छन् । नीजि क्लबले निरन्तर प्रशिक्षण गर्ने क्षमता छैन ।’ उनले भने ।
उनले थपे, ‘एक त प्रतियोगिता हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि विभागले जित्छ । अरु हेरेको हेरै हुन्छ ।’
उनले प्रशिक्षण राम्रो बनाउन आर्थिक रुपमा सवल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जति खेलाडी उत्पादन हुन्छन् । उत्तिकै प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जति प्रतिस्पर्धा बढ्यो, त्यतिनै उत्कृष्ट खेलाडी निस्किन्छन् ।’
महिला भलिबलमा तीन विभाग र डाईमण्डसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य कुनै क्लब नभएको राईले बताए ।
खेलाडीको भविष्य संस्थानको हातमा
२०४६ अघि नेपालको भलिबललाई हेर्ने हो भने सबै खेलाडीलाई संस्थानहरुले संरक्षण गरेर राखेको थियो । उनीहरुको पढाईको साथसाथै खेल पनि राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिले खेलाडीको भविष्य तथा पढाईको महत्व छैन ।
प्रशिक्षक राईले विभिन्न संस्थानले खेलकुदमा चासो देखाएर सामाजिक सुरक्षा कोष रकम अन्यत्र लगानी नगरी खेलकुदमा गर्ने हो भने खेलाडीको भविष्यको सुनिश्चित हुने बताए ।
‘नेपालमा धेरै ठूला कर्पाेरेट तथा संस्थानहरु छन् । उनीहरुले खेलाडी उत्पादनमा लगानी गरेमा पक्कै पनि खेलाडीको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो । पहिला यसरीनै खेलाडी जोगाइएको थियो ।’ उनले भने ।
एसियन भलिबल च्याम्पियनसिप फिलिपिन्समा हुने
भलिबल गतिविधि बन्द गर्ने एनभीएको निर्णय
अरुणा, कोपिला र बिनिता सम्मानित
सरस्वती अध्यक्ष कप भलिबलमा सर्वोत्कृष्ट
न्यु डायमण्डलाई हराउँदै एपीएफलाई उपाधि
पुलिसलाई हराउँदै आर्मी तेस्रो